IPixel 3 XL kunye nenotshi yayo efihlakeleyo | I-Androidsis
Kwiiyure nje ezimbalwa ezidlulileyo sikwazile ukuba sazi ngokusesikweni iimodeli ezintsha zeefowuni ezaziwayo zeGoogle. IGoogle Pixel 3 kunye nePixel 3 XL sele ziyinyani. Kwaye kungekudala siza kuba nakho ukuzithenga, ngeli xesha ewe, zisuka eYurophu. Njengomanduleli wayo, iPixel entsha imele ukubonelela ngamandla kunye nomgangatho kuwo omane amacala.
Enye ye zokuqala ezingaziwa Kuqwalaselwe ngayo ukuvuza kokuqala kwale smartphone intsha ukuba uGoogle angathathwa yimpikiswano ye "notch". Okokugqibela, kwaye phantse konke ukuqikelela kuyazaliseka, eyona inkulu kwiPixel 3, i-XL, inotshi enkulu ephezulu.
1 Ukuba siyayifihla inotshi, sinika inxenye yescreen sayo
2 Intsingiselo ye "notch" kukusebenzisa ngakumbi iphaneli yangaphambili
Ukuba siyayifihla inotshi, sinika inxenye yescreen sayo
Sele yenzekile xa imodeli yangaphambili ye-iPhone X yangena emarikeni. Inotshi yayine sabalandeli kunye nabagxeki, njengayo yonke into entsha ebonakalayo. Kuqala kwakungaqhelekanga, kwaye kungonwabisi kubasebenzisi. Njengomzekelo, emngxunyeni apho i-icon yokulawula inqanaba lokutshaja kwebhetri ibikhona, amanani eepesenti awanelanga. Ngaphandle kwamathandabuzo into engekhoyo.
Kodwa sele siqhelile ukuhlangabezana nenotshi, ngaphandle kwento eyaziwayo, phantse kuzo zonke iimodeli zenkampani nganye. Asizukungena kwingxoxo mpikiswano malunga nokuba kungcono okanye kubi ngakumbi ukuba unayo okanye hayi. Kodwa kuyinyani ukuba ngobukho bayo ipesenti yokusetyenziswa kwepaneli ye-smartphone iphezulu kunokuba ngaphandle kwakhe.
Siye sakwazi ukwazi, ngendlela «iindaba», ukuba inotshi yeGoogle Pixel 3 XL inokufihlwa ngesoftware. Akukho nto intsha kuba kukho usetyenziso olunokuyenza nakwesiphi na isixhobo esine "ishiya". Kodwa siyazibuza Yintoni inqaku lokuthenga i-smartphone ngenotshi ukuyifihla? Ukuthatha le lahleko yeesentimitha eziluncedo kwiscreen.
Intsingiselo ye "notch" kukusebenzisa ngakumbi iphaneli yangaphambili
Enkosi kwi "notch" edumileyo sinokufumana okuninzi ngaphandle kweefowuni zethu. Kwaye unqwenela ukwenza baneesikrini ezinkulu kwiiitheminali ezinganyusiyo ngobukhulu. Kungenxa yoko le nto kubonakala ngathi kuyinto encinci kuthi ukuyithenga i-smartphone ngescreen esihle kwaye "siyirhoxise" inxalenye yayo.
Njengoko sihlala sisitsho, incwadi yeencasa ayinanto. Kodwa ukuba ungomnye wabo bangayithandiyo inotshi edumileyo, into yakho kukuba uthenga i-smartphone engenayo. Zininzi ezilungileyo kakhulu kwintengiso, awucingi?
Umendo opheleleyo kwinqaku: I-Androidsis » Izixhobo ze-Android » Iiselfowuni » IPixel 3 XL kunye nenotshi yayo efihlakeleyo
Ukuba uGoogle ukwenzile oko, yiyo loo nto yamkela ukuba uninzi lwabasebenzisi bayithiyile into abayenzileyo ngenotshi
Kukho imiphetho emikhulu eseleyo ngaphezulu
[APK] Unendlela yeXiaomi Animoji kuyo nayiphi na ifowuni ye-Android